Top 5 Iningi zothando zemininingwane Ohambweni EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Top 5 Iningi zothando zemininingwane Ohambweni EYurophu
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 28/08/2020)
Kungakhathaliseki ukuthi sishade iminyaka engu, noma asalokhu izigaba zokuqala sobuhlobo, Njalo ngemva ungazuza isikhathi izinga wachitha ndawonye. Kumnandi ikakhulukazi ukwenza umzamo for Day Valentine sika. Ukuhamba ngesitimela kuyindlela ephelele ukuze uqale ukuthandana futhi kukankosikazi yokubaleka nomunye wakho othandekayo. Sheshisa buthule emaphandleni noma izintaba. Unqamule esidlule ebukekayo, amadolobha lasendulo noma ogwini lwasenyakatho-a glacial echibini. Nazi phezulu 5 kakhulu romantic isitimela amade Europe. Ngamunye unikeza okuthile okukhethekile Day Valentine.
London ukuze Venice is our First Romantic Train Journeys
Lokhu uhambo ngesitimela kuyokulethela nothandekayo wakho ngokusebenzisa aluhlaza emaphandleni. Khona-ke uzoba Roll esidlule ezintabeni umxhwele Switzerland futhi Austria. Olandelayo, uzothola indawo enhle kakhulu yeVenona yase-Italy ngesitimela ngaphambi kokufika ekugcineni emabhange eVenetian Grand Canal.
Paris nice, France
Talking the train through France you’ll be exposed to the famous color and light of the country. Kusukela onsomi lavender emasimini-Cote d'Azuri nasemanzini aluhlaza. Marvel indlela lapho ukukhanya kwelanga kungena ngaphakathi segolide ngomlingo obhapathiza konke, uku uswidi. Kusukela ngo edolobheni kakhulu romantic kuzo zonke, Paris, uhambo lwakho wesitimela kuzodlula ogwini Ungadliwa emabhishi okukhulu. Uzobuye futhi bheka amadolobhana amahle nojongilanga futhi lavender emasimini Provence.
ILyon ukuya eNice ngesitimela
Florence eRoma, Italy
Yazi izinkulungwane zeminyaka isiko futhi amabili yisakhiwo sodumo amagugu Italy, bonke kwelinye adventure romantic. Bheka yobuciko kanye izibiliboco Tuscan Florence. Futhi, vakashela jewel umqhele waseRoma, ICodex. Yini enye engcono?
You and your loved one can travel by train between two wonderful cities as the magnificent Italian countryside unfolds past your carriage window. Ngokuqinisekile, lokhu ingenye kakhulu romantic isitimela amade Europe.
Venice eRoma Izitimela
Levanto La Spezia – phezulu 5 kakhulu romantic isitimela amade Europe
Lesi sigaba kancane ujantshi ukhonza Italian ezinhlanu Riviera villages of the Cinque Terre fashion okukhulu. Lolu hambo isitimela kuyinto esingaphansi kwehora indlela ngayinye, ngakho uthatha isitimela ngenye indlela. Khona-ke ungakwazi ukuchitha usuku izintaba amazing emizileni emzaneni-yokuxhuma emuva lapho uqale. Lokhu uhambo ngesitimela kuwumbukwane ngempela nge ukubukwa yoLwandle Ligurian, iyashintsha iyaphupha ibe nemizana, izivini masimu kanye Amasimu ukhombise impilo.
EMilan Levanto Izitimela
EMilan La Spezia Izitimela
Siena ukuze Levanto Izitimela
Zurich ukuze Innsbruck
Qala isitimela uhambo lwakho romantic Zurich. Vakashela Bahnhofstrasse, omunye kakhulu ezikhangayo yezitolo ezitaladini emhlabeni, futhi uthenge Memento. Marvel ngesikhathi imisebenzi esiphawulekayo Van Gogh futhi Monet ngesikhathi okuningi babemthanda Kunsthaus art igalari. Kuningi imibhangqwana ukuba ngikwenzele Zurich phambi snuggling phakathi ebabazekayo ngesitimela ukuze Innsbruck. Izikhangibavakashi ngasogwini lomfula Lake Zurich ekufezeni emangalisayo Alpine kwenkundla. Uzophinda idlule langa izimfunda entabeni futhi vistas emangalisayo. Yini kungaba romantic more?
Ucabanga kokuthatha isitimela uhambo romantic ne othandekayo wakho? Iya ku Londoloza Isitimela ukuze uhlole zonke fares yethu kwekhethelo futhi uqale uhlela adventure wakho olandelayo!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-5-romantic-train-journeys-europe%2F- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#romance London romantic zothando travelflorence travelnice travelparis travelrome travelvenice
New zemininingwane Links Asia Nge-Europe